Day: March 10, 2019 - Kichuu
China grounds Boeing 737 MAX planes after Ethiopian air crash (CNN) — The Chinese government has grounded all Boeing 737 MAX 8 jets, after an Ethiopian Airlines plane of the same model crashed shortly after [Read More]
“SAGALEE. IRBUU” KA TORBAN KANAA DHAGGEEFFADHAA…DAAWWADHAA!!! SEENAA Y.G (2005) ﻿﻿﻿﻿
Malaamaltummaa Lammaa Afaan Dammaa! Damee Boruutin, Bitootessa 10, 2019 Malaamaltummaan deemuun yaroo tokkoo fi lama laga nama ceesisuu ni danda’a taha. Garuu malaamaltummaa kaayyoo fi akeeka godhatanii ittii jireenya gageefachuun gonkuma hin danda’amu. Guyyaan sobni [Read More]
Hidhaanif Daraaran Ummata Oromoo gahu itti fufee jira “Farajaa Geetaachoo kan dhiyeenya mana hidhaa Qilinxoo bahe deebisanii hidhuun kaleessa waggaa 12 itti murteessan. Akkan odeeffadhetti mirga wabii sii eegna jechuun qarshii 20,000 gaafatanii ture. Qarshii [Read More]
Ethiopian Airlines Boeing 737 crashes near Addis Ababa By Robyn Kriel and Tara John, CNN, Sun March 10, 2019 (CNN)An Ethiopian Airlines Boeing 737 heading to the Kenyan capital Nairobi has crashed near Addis Ababa, [Read More]